Recipe Kiev ikhekhe
Silungiselela ikhekhe leKieg ekhaya ekhaya lethu Ikhekhe lethu laseKiega aliyona nje uphawu lweKiev, kodwa nekratshi lexesha laseSoviet. Kwakunjalo ikhekhe eyayithandwa nguLeonid Brezhnev, kwaye ngemihla yokuzalwa yakhe iigwele zithunyelwa kwiibhaki ze-Union yonke. Kwakungenxa yekhekhe esasimile kumgca weeyure ezingama-2 kwiivenkile ngexesha lexesha elingenammiselo kunye ne-perestroika. Inkosikazi nganye iphupha ngokufumana iresiphi, kwanexesha elide. Kodwa oko konke ... Kwaye ngoku kukho yonke imveliso efunekayo, kwaye kuvela ukuba akukho nto enelisayo kwi-recipe, njengoko sasicinga. Le recipe ilandelwa yimi kwaye iboniswe okokuqala. Ikhekhe lenziwe ngamanqaku ama-2 kunye nama-cashew nuts, ukhilimu we-oyile oqhelekileyo "uCharlotte" kunye ne-cognac, i-cream yamancinci. Ndenze ikhekhe lokuzalwa kwam kwaye ndaphatha izihlobo zam eSwitzerland. Wonke umntu wayevuyisiwe, kwaye ndiyaziqhenya ngokupheleleyo nge-confectioners ye-Ukraine. Ndiza kunikela ikhekhe e-Kiev kwaye ndilindele impendulo yakho. Zonke eziphefumlelweyo
Silungiselela ikhekhe leKieg ekhaya ekhaya lethu Ikhekhe lethu laseKiega aliyona nje uphawu lweKiev, kodwa nekratshi lexesha laseSoviet. Kwakunjalo ikhekhe eyayithandwa nguLeonid Brezhnev, kwaye ngemihla yokuzalwa yakhe iigwele zithunyelwa kwiibhaki ze-Union yonke. Kwakungenxa yekhekhe esasimile kumgca weeyure ezingama-2 kwiivenkile ngexesha lexesha elingenammiselo kunye ne-perestroika. Inkosikazi nganye iphupha ngokufumana iresiphi, kwanexesha elide. Kodwa oko konke ... Kwaye ngoku kukho yonke imveliso efunekayo, kwaye kuvela ukuba akukho nto enelisayo kwi-recipe, njengoko sasicinga. Le recipe ilandelwa yimi kwaye iboniswe okokuqala. Ikhekhe lenziwe ngamanqaku ama-2 kunye nama-cashew nuts, ukhilimu we-oyile oqhelekileyo "uCharlotte" kunye ne-cognac, i-cream yamancinci. Ndenze ikhekhe lokuzalwa kwam kwaye ndaphatha izihlobo zam eSwitzerland. Wonke umntu wayevuyisiwe, kwaye ndiyaziqhenya ngokupheleleyo nge-confectioners ye-Ukraine. Ndiza kunikela ikhekhe yaseKieg kwaye ndilindele impendulo yakho. Zonke eziphefumlelweyo
Amaqanda inkukhu 14 amaqhinga.
Ushukela 880 g
Cashew 360 g
I-Butter 400 g
I-cocoa powder 40 g
Ubisi 350 ml
Inyathelo 1 Lungiselela izithako: 12-14 amaqanda, ubisi, ibhotela, iswekile, ishukela, i-cocoa powder, i-nuthew nut kunye ne-cognac.
Inyathelo 2 Ukwahlula iiprotheyini eziphuma kwizikhuni ezi-2 izitya ezingama-220 amagremu nganye (sonke sidinga 440 g weeprotheni). Ndineeprotheni ezili-14. Ukumboza ifilimu yokutya uze uyibeke endaweni efudumele 30-40 ° C malunga neeyure ezingama-24. Umfudumala, ngokukhawuleza inkqubo iya kuhamba. I-Yolks kwisitya esifanayo njengoko sigubungela kwaye sihlambulule kwifriji.
Inyathelo 3 Iiprotheyini ezivuthiweyo ziya kuba nemibhobho. Kufuneka bajonge ngale ndlela.
Inyathelo lesi-4 Sibetha iiprotheni ezingama-220 g ukusuka kwisitya esinye kunye neengca zetyuwa ezi-2 kwi-foam eqhubekayo. Hlanganisa isahluko seswekile - 440 g, ngaphandle kokuma, sula enye imizuzu eyi-10. Ukuba i-oven yakho ikuvumela ukuba umise iiphini ezimbini kunye ne-meringue kanye, uze uphinde wenze izenzo kunye nesahlulo sesibini seeprotheni. Ukuba akunjalo, senza oku ngaphambi kokumisa i-meringue yesibili.
Inyathelo lesi-5 180 i-cashews ingenelela ngenyameko kwisabelo sokuqala seeprotheni ezibetywayo, musa ukuphazamisa ixesha elide, kwaye kuphela kwicala elinye ngokuhamba ukusuka ngaphantsi.
Inyathelo 6 Ngokukhawuleza usasaze inhlama ephepheni, isangqa nge-diameter ye-30 cm. Izinga kwaye zomile kwi-oven esanduleleyo ukuya kwi-110 ° C ngeyure eli-1, ngoko ukunciphisa ukuya kwi-100 ° C uze umelele iiyure ezingama-2. Ndomisa ngqo 2 meringues kwi-oven yombane kwindawo eshushu. Inzuzo yomoya oshisayo kukuba zombini iigwele zomekile ngexesha elinye. Ngokukhawuleza uvula i-grate, uyikhulule ephepheni uze uyipholise.
Inyathelo lesi-7 Iyure ngaphambi kokuba i-meringue ikulungele, masiyikhathalele ukhilimu. Ubilise ubisi ngeswekile. Siza kubeka eceleni.
Isinyathelo 8 Hlaza ngokukhawuleza zonke izikhupha ezibukhulu bokukhanya.
Inyathelo 9 Ngokukhawuleza ukubetha izikhupha, ukuthulula kwiqhekeza elincinci lobisi lwesiraphu.
Inyathelo 10 Beka ipenki kwisitofu kwaye rhoqo, uvuselele, ulethe ukhilimu ukuze ubilise kwaye ususe ecaleni, uqhubeke 2 eminye imizuzu ukuphazamisa, ukhilimu uya kubetha.
Inyathelo 11 Makupholile kwindawo yokuhlamba i-ice ngaphandle kokuyeka ukukhupha. Ikhefu iya kuba yinto efanayo.
Isinyathelo 12 Kubalulekile ukuba ioli ifumaneke ngokushisa okufanayo njengeqanda leqanda. Sibetha i-550 g yeoli.
Inyathelo 13 Khangela ukhilimu kwioli, whisking it mixer kuze kube lula.
Inyathelo 14 1/3 le-krimu iyahlukana kwenye isitya kwaye songeza isiqingatha se-cocoa powder. Kulo lonke ukhilimu, yongeza i-vanilla ishukela kunye ne-3-4 tablespoons. l. cognac. Ubuninzi be-cognac bunokuhluka kwiincam.
Inyathelo 15 Iimbumba zombini zivuthwa kwaye zihlukaniswe ngamnye kwi-1 epheleleyo. l. ukuhlobisa.
Inyathelo le-16 Beka ukhilimu kwizantsi yesitya ukuze ikhekhe ingadluli. I-meringue yokuqala ibeka icala eliphantsi. Faka isicelo esifanayo kwi-cream yonke.
Inyathelo 17 Phezulu, faka i-meringue yesibili kunye nezantsi uze ucofeze encinci.
Inyathelo 18 Ukhilimu we-tsokotle kumacala kwaye ubhalele phezulu. Ukulungelelanisa ukhilimu nje ngokulula. Ukucoca ngamacala kunye neetyhokolethi okanye i-nut.
Inyathelo 19 Kwisikrini esilindelekile sokuhlobisa, ukuqhuba kwenye i-50 g yeoli. Kwaye kwiphokoleta ekhethiweyo ingenye i-20 g ye-cocoa powder. Ekhuthazayo.
Inyathelo lama-20 I-cream ekwenzeni imboleko ibekwe kwisikhwama sokutya kunye nokuhlobisa ngesithethe ngeentyatyambo kunye neepateni. Sihlambulule kwiqrijini ngeeyure ezingama-5 okanye ngaphezulu. Kwaye ngoku kunxilisayo!
I-Tuscan iphae nge zucchini
I-cheese izitya zesobho
I-Omelet kwi-oven microwave
Iipancakes kunye ne-maple isiraphu
I-Herring ne-beet ne-sour-cream kunye ne-mandarin yokugqoka
Ukutya kuhlambulula umzimba weexibisi
UMculo yindlela efanelekileyo yokufunda ulwimi lwangaphandle
Urhulumente womhla wabantwana bokukhula kwangaphambili
Indlela yokubuyisela inja nge-zipper?
Isaladi ngamakhowe, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi kunye noshizi
Isifo sikashukela sisigxina: iimpawu kunye nonyango
Ukunikezelwa kwezemvelo okanye kwicandelo lokutya kweso-caesarean - kungcono?